काठमाडौं । भनिन्छ घर पछिको सबैभन्दा अर्को ठूलो लगानी गाडी हो । सामान्य आम्दानी भएका मानिसहरुले गाडी खरिद गर्न सक्दैनन। धेरै मानिसहरुले गाडी चढ्ने सपना बुन्छन् कतिपयको उक्त सपना सेकेन्ड
नेपाल बैंकले ल्यायो ग्रीन सेभिङ निक्षेप योजना, यस्ता छन आकर्षक सुविधाहरु
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले ‘ग्रीन सेभिङ निक्षेप योजना’ ल्याएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको ८३ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आगामी कार्तिक ३० गतेदेखि लागू हुने गरी सो
कसरी बन्ने रातारात धनि ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
काठमाडौं । पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ । अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने ? अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ ।
सवारी संचालनमा जोर विजोर प्रणाली लागु, महिला चालक रहेको सवारीमा भने छुट
काठमाडौं । यातायातको साधनबाट निस्किने धुवाँले वातावरणमा प्रतिकुल असर पारेको भन्दै सवारी प्रणालीमा जोर विजोर लागू गरीएको समाचार बाहिर आएको छ । दिल्लीमा विगत केही समय देखि वायुमा निकै प्रदुषण
दशैं भत्ता र तलब नपाएपछि कर्मचारीले काम छोडे, ११ दिनदेखि खानेपानी बन्द
बागलुङ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीका ६ सय परिवारले झण्डै ३४ वर्ष पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको छिस्ती खानेपानी आयोजना बन्द भएको छ । दशैं भत्ता र मासिक पारिश्रमिक रोकिएको भन्दै
भर्खरै धादिङमा बोलेरो दुर्घटना
धादिङ । धादिङको वेनिघाटरोराङ गाउँपालिका नजिकै तुनीखोलामा बोलेरो जिप दुर्घटना भएको छ । ग १ ज ३०११ नम्बरको बोलेरो आज विहान करिब ९ बजे खोलामा पल्टिँदा दश जना यात्रु घाइते भएका
बागलुङ । सहकारी संघ संस्थाहरुका साधारणसभा कर्मकाण्डी भए, सदस्यहरुको सभालाई तामझाम र नेताहरुको भाषण गर्ने थलो बन्यो भन्ने गुनासोको सहकारीले सुनुवाई गर्न थालेका छन् । सदस्यहरुको सहभागितामा हुने सहकारीको सर्वोच्च
गोरखा र धादिङका भूकम्पपीडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य
काठमाडौं । पहिलो किस्ता पाएर पनि घर बनाउन नपाएका भूकम्पपीडितले बढीमा पाँच वर्षका लागि रु तीन लाख ऋण सहयोग पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र युके एड
किन्ने होइन त बजाजका मोटरसाइकल ? यस्तो छ नयाँ मूल्य
काडमाडौं । मोटरसाईकल अहिले कामकाजी व्यक्तिदेखि व्यवसायीहरुसम्मका लागि नभइ नहुने आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ । बढ्दो सवारी चापले गर्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने ढिलाइका कारण पनि मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिक पनि गौरवपूर्ण हुनुपर्दछ : प्रम ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति पनि गौरवपूर्ण हुनपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयको एक्सन रुमबाट आज विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले